Isi > Atụmatụ > Strategy maka ọnụọgụ abụọ nhọrọ ọhụrụ 2019
28.02.2019 · 0 · Ntinye niile maka February 2019
Usoro maka ọnụọgụ nhọrọ nhọrọ 2019 bụ nnukwu nhọrọ maka ndị ahịa novice. Iji nweta obi ike n'ahịa ha ma mee ka isi obodo ha bụrụ ụzọ kachasị sie ike ma dị ize ndụ n'ịzụ ahịa. Gụọ na chọpụta otú i nwere ike isi mee ka azụmahịa azụmaahịa 2019.
Oge ndi mmadu na-etinye ego n'inwe ego ha na-ejide ego n'inwe ego ahia abughi ihe ndi mmadu na-etinye ego maka ahia. Otú ọ dị, na ọnọdụ a, ịnwere ike ịnweta ọnụ ọgụgụ kasị elu nke uru.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a:
Ihe kachasị dị mkpa nke mmegharị ọnụ.
Eziokwu nke ngwaọrụ ngwaọrụ.
Ọnọdụ kachasị mma iji nweta ọnọdụ bara uru.
Na nzụlite a, anyị na-akwado gị usoro Lazybones. Nke a bụ ezigbo ọnụọgụ abụọ nhọrọ maka ọhụrụ 2019, kere na nwalere na Jenụwarị 2019. Algọridim ya na-ekpebi mmegharị omume ndị ahụ n'oge awa. Ụkpụrụ nke ọrụ nke usoro ihe a dabeere na iji ihe ngosi na-egosi na ọgbara ọhụrụ na ọrụ oscillator. Nke a na-enye gị ohere igbalite nhachaa nke amụma gbasara usoro ahụ na irè ya.
Usoro Ndepụta Ngwaahịa
Ka anyị malite site na ịtọ ntọala akụrụngwa nke usoro ahụ n'usoro ọrụ. Iji chọpụta mgbanwe na-agbanwe agbanwe n'oge na-efu, anyị ga-achọ otu ihe ntinye aka nke nwere ike ịzaghachi n'ụzọ doro anya na mmalite nke ọnọdụ ọhụrụ. N'otu oge ahụ, ngwá ọrụ nchịkọta kwesịrị inwe nzaghachi ntakịrị n 'ọhụụ ahịa na ịmepụta ihe ngosi akara ngosi. Ọ bụ nke a algorithm maka ọrụ nke atụmatụ atụmatụ nke ga-enye gị ohere inweta amụma kachasị mma ahịa. Iji mepụta template usoro ahia, anyị ga-achọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ:
Hurne Channel Channel mmepụta oyiri - usoro nchịkọta nke a jikọtara ya na algorithm maka iwuli ọwa nke ngosi Bollinger. Ma ebe a, anyị abụghị ọmarịcha ọgbara ọhụrụ nke ahịa ahịa, ma ụzọ abụọ dị iche iche na-arụ ọrụ ego n'otu oge - oge dị mkpirikpi na ọkara. Njikọ nke oge dị iche iche nke ịmepụta ihe ngosi ahụ na-enye gị ohere ịkọwaa mpaghara mpaghara mgbanwe nke ahịa. Na-enyekwa ozi gbasara usoro mmepe na okwu okwu. Dabere na nke a, anyị na-enweta akara ngosi mgbaàmà nke kachasị dị irè.
Mbịakọta linear regression - nyocha a bu oscillator. Ọ na-eji ihe nrịba ama nke mgbagwoju nke uru nke ihe onwunwe site na nkezi data onyonyo maka oge ụfọdụ dị ka akara maka ahia. Ya mere, anyị nwere ngwá ọrụ na-eji obere alaghachi na ahịa mkpọtụ na ihe ziri ezi maka nhazi ọnọdụ ahịa. Tụkwasị na nke ahụ, oscillator dị irè dị ka ngwá ọrụ maka nzacha ihe nyocha nke ọrụ ọrụ nchepụta isi.
Mgbe ị na-etinye nchịkọta akọwapụta nke ọrụ nchịkọta ihe ngosi na eserese ọnụọgụ ahịa, ị ga-enweta usoro usoro usoro nke usoro a:
Iji nweta ọnọdụ ahịa kachasị mma, anyị na-akwado iji usoro ihe eji eme atụmatụ maka nkeji oge nke a. Ya mere, ị ga-eme ka ịzụ ahịa dịkwuo elu ma nweta ohere ịzụ ahịa n'ọnọdụ kachasị mma.
Biko mara na maka ịnweta usoro egosiputa na anyị ji ọrụ ọrụ ịntanetị tradingview.com. Ihe omuma a na-eme ka o kwe omume ọ bụghị naanị iji ọrụ ndị dị mkpa rụọ ọrụ, kamakwa ọ na-agbasawanye ọtụtụ usoro nzụpụta ahịa nke nwere ike iji mee ka usoro nhazi ahụ dị ọcha.
Esi ahia ahia
Maka ojiji na ọnọdụ ahia na uru dị elu nke akụnụba ahụ, usoro nyocha usoro ahụ na-esite n'usoro ndị na-egosi:
Ngosipụta nke ọhụụ na-emepụta ihe nkiri Hurne Channel Channel mmepụta oyiri acha uhie uhie gafere n'ogo nke usoro mgbasa ozi na-acha uhie uhie
Nkọwa akụkọ na ịdị omimi nke Linear Regression Ọrụ nkedo na-agafe nrịgo nke 0.
Maka ojiji maka ahia maka ọdịda uru nke ihe bara uru, usoro nyocha usoro ahụ na-esite na njedebe ndị na-egosi:
Osimiri ahụ dị warara nke ntanetị nke Chanst Channel Channel Clone egosi nke acha uhie uhie gafere ala nke etiti nke usoro okwu-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọwa ahịa
Nkọwa akụkọ na nke dị omimi nke Linear Regression Ọrụ nkedo gafere na ọkwa 0
Ná mmalite nke nyochaa usoro, anyị kwuru na usoro a na-egosi na oge ruru otu awa. Ma nke a apụtaghị na ị ga-eji ọnọdụ ahịa na ihe ngosi ịkwụ ụgwọ dị otú ahụ. N'okwu a, ị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na oge niile. A na-enweta nnukwu ọnụego mgbe egosiri akara nke usoro ahụ na ọnọdụ na njedebe nke 10, 15, 30 nkeji. Ya mere, site na ijikọta ọnụego mgbapụta ụgwọ, ọ ga-ekwe omume ịmepụta nchịkọta ego nke dị iche iche. Nke a na-enye nsonaazụ ahịa dị elu karịa n'ọnọdụ dị ize ndụ.
Nzere egwu mgbe ị na-arụ ọrụ n'ahịa dị n'usoro azụmahịa: anyị na-ahazi ọkwa nke ahịa ahịa na 5% nke ego akaụntụ gị. Mgbe anyị na-arụ ọrụ na akaụntụ kachasị, anyị na-arụ ọrụ na ọnọdụ nwere uru mbụ.
Debanye ma malite itinye ego na atụmatụ Lazybones
Ụdị ihe atụ nke Ahịa Action - rails
Isi Ahịa Action -...
Ụdị ọtụtụ dịka atụmatụ ahia maka turbooptions
Mee otutu usoro dika ahia ahia ...
Usoro nyocha maka nhọrọ ọnụọgụ abụọ
Ntucha usoro maka ọnụọgụ abụọ ...
Mgbasa Ozi Ọma
Ntube nke Break5 (100%) 5 votes ...
Nhọrọ nhọrọ ọnụọgụ abụọ